Abavelisi kunye nabaxhasi be-Hydration bladder - China abavelisi bokususa isinyi sefektri
2021 Ingxowa enkulu yaManzi yokuVula eNkulu ePhakamileyo
Ingxowa yamanzi yamva nje engama-2021 yamkela ezona teknoloji ziphambili kunye nezona ndlela zintsha. Kuyinto elula ngakumbi kwaye ikhululekile ukuyisebenzisa. Iyahlangabezana neemfuno zokhuselo lokusingqongileyo kwilizwe jikelele, ayiyityhefu kwaye ayinalo ivumba elikhethekileyo, ayinayo i-BPA, kwaye ikudidi lokutya. Yizisa amava amahle.
Inombolo Inombolo: BTC071
Igama lemveliso: Isinyi samanzi
Isixhobo: TPU / EVA / PEVA
Ubukhulu beFilimu: 0.3mm
Ukupakisha: 1pc / ibhegi poly + ibhokisi
Ezemidlalo zangaphandle Ingxowa yamanzi eNtsha yokuHamba iiHiking Running
Ingxowa yamanzi enoyilo olulungeleyo, iqhosha elilodwa lokuyila umbhobho wokutsala, uyilo olukhulu lokuvula ibha yesilayidi, uyilo lomda wesikali, kunye noyilo lombhobho wokutsala othambekisayo, konke kuzisa lula ngakumbi sebenzisa. Kwaye ikwinqanaba eliphezulu kunye nobomi benkonzo ende.
Inombolo Inombolo: BTC081
Imidlalo yangaphandle 6L PVC Shower Bag ephathekayo
Ingxowa yamanzi yezemidlalo yangaphandle ekuvumela ukuba ukonwabele ukuhlamba ngaphandle. Ilungele iimeko ezahlukeneyo, inokusetyenziswa okuninzi, iyawa, kwaye kulula ukuyiphatha. Ukumelana neinyembezi akululanga ukonakalisa. Sebenzisa ilanga ukunyusa ubushushu bamanzi, ukuvumela ukuba uvule indlela entsha yokuhlamba ngaphandle.
Inombolo Umba: BTC021
Igama lemveliso: Ibhegi yokuhlamba
imigaqo: 28 * 48mm
Ingaphandle Sport Hydration Bladder Bag
Isingxobo semidlalo yamanzi sangaphandle ekumgangatho ophezulu seBPA, ephathekayo kunye nenobuhlobo kwindalo, eli lelona qabane lakho lingumqabaqaba, ukunyuka intaba, ukuhamba ngebhayisikile kunye nokukhempisha.
Imidlalo yangaphandle ye-hydration bladder
I-hydration bladder yenziwe nge-non-ityhefu, ayinabumba, iyabonakala, i-latex ethambileyo okanye i-polyethylene yokubumba inaliti. Inokubekwa nakweyiphi na umsantsa wobhaka ngexesha lokunyuka kweentaba, ukuhamba ngebhayisikile kunye nokuhamba ngaphandle. Kulula ukugcwalisa amanzi, kulula ukusela, ukuncanca njengoko usela, kunye nokuphatha. Ithambile kwaye intofontofo.
Ingxowa yamanzi eco-friendly ngaphandle kwe-BPA, uyilo olukhulu olunelungelo elilodwa lomenzi lokuvula ulungele ukuba ulusebenzise, ​​nokuba uyakhwela, ukunyuka intaba, ukuhamba ngebhayisikile okanye imidlalo egqithileyo, le bhegi yamanzi iya kuba ngumncedisi wakho.
Ingxowa yaManzi yangaphandle yeHydding Bladder Water Bag
Esi sisixhobo esifanelekileyo kwiimbaleki. Ukuvulwa okubanzi kukuvumela ukuba ungenise ngokukhawuleza amanzi endle. Ungakhathazeki malunga nobutyebi bamanzi xa usenza umthambo, kwaye ungaze usebenze ungenanto.
Umgangatho ophezulu we-Reservoir Reservation Hydration
Ibhegi yokuhambisa amanzi yenziwe nge-non-ityhefu, ayinabumba, iyabonakala, ithambile kwaye inobuhlobo ngenaliti yokubumba. Inokubekwa nakuphi na umsantsa wobhaka ngexesha lokunyuka kwentaba, ukuhamba ngebhayisikile kunye nokuhamba ngaphandle. Kulula ukongeza amanzi, kulula ukusela, ukufunxa kunye nokuphatha xa usela.
Ukusonga Ingxowa Yamanzi Yokunyuka Intaba
Inebhegi yamanzi encinci evulekileyo ngobuchule. Umahluko owahlukileyo ohlaza okwesibhakabhaka nomnyama. Ungenziwa ngemfuneko kulo naluphi na ubungakanani okanye izinto ozifunayo, ezinje ngePU, i-EVA, i-PEVA. Kuquka ulwenziwo ubude umbhobho ubude. Uyilo olwahlukileyo lwesigqubuthelo sethuli somlomo wokutsala unokukuphepha ukuqokelela uthuli. Ifanelekile imisebenzi eyahlukeneyo yangaphandle.